Hisokatra ny fizahan-tany Seychelles: Drafitra tsikelikely navoakan'ny filoha Danny Faure | Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika
Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Raharaham-panjakana • Tombontsoa fampiasam-bola • Other • Vaovao momba ny dia any Seychelles • Vaovao momba ny fizahantany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Travel Wire News • Vaovao mivalona
Hisokatra ny fizahan-tany Seychelles: Drafitra tsikelikely navoakan'ny filoha Danny Faure
Home » Lahatsoratra » Vaovao momba ny fizahan-tany any Afrika » Hisokatra ny fizahan-tany Seychelles: Drafitra tsikelikely navoakan'ny filoha Danny Faure
Filoha Seychelles Danny Faure niresaka tamin'ny mponin'ny Repoblikan'i Seychelles anio alina momba ny fanalefahana ny famerana mifandraika amin'ny toe-javatra COVID-19.
Ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany no mpamatsy vola lehibe indrindra sy indostria ao amin'ny paradisan'ny Ranomasimbe Indianina. Ny fisokafan'ny fizahan-tany dia tsy misy risika be. Ilaina ihany koa ny fisorohana ny firodanan'ny toekarena ao amin'ny firenena. Fantatry ny filoha Danny Faure izany ary mieritreritra izy fa manana tetika. Azo atao soa aman-tsara ve izany ho an'ny Seychelles sy ny mpitsidika?
Fizahan-tany manokatra: Fandikana ny lahatenin'ny filoha Danny Faure tamin'ny People of Seychelles
Rahalahy sy rahavavy Seychellois,
Androany, olona maherin'ny 3 tapitrisa eran'izao tontolo izao no voan'ny coronavirus. Ny isan'ny olona maty niaraka tamin'ny COVID-19 dia maherin'ny 200, 000. Hitanay ny fijaliana sy ny fanaintainana aterak'io virus io isan'andro amin'ny vaovao. Amin'izao fotoan-tsarotra izao, i Seychelles dia mijoro ho firaisankina amin'ireo firenena sy olona manerantany miady amin'ity virus ity.
Eto Seychelles, nanana olona 11 izahay izay nanaporofo tsara. 5 amin'izy ireo no mbola ao amin'ny tobim-pitsaboana. 6 no efa sitrana ary efa nivoaka ny tobim-pitsaboana. Faly aho milaza fa 3 amin'ireo olona 6 ireo no nody.
Soa ihany, satria ny tranga faha-11 nosoratanay tamin'ny 5 aprily, dia mbola tsy nanoratra tranga COVID-19 vaovao izahay.
Ny fepetra napetraka ankehitriny dia ny hitandrovana ny filaminan'ny mponina. Fepetra ilaina izany. Ny sasany amin'izy ireo, toy ny fameperana ny fotoam-pandevenana, dia niteraka fanaintainana be. Fantatro fa nandritra io vanim-potoana io dia tsy azo natao ny nanatrika ara-batana niaraka tamin'ny olon-tiantsika, ny fianakaviantsika ary ny namantsika. Misaotra anao rehetra aho noho ny fahazoana sy ny sorona nataonao.
Manoloana ny fandrahonana lehibe indrindra amin'ny fahasalaman'ny olombelona ankehitriny, dia niara-nivory izahay ary nijanona teo amin'ny sehatry ny fiarovana. Isika rehetra dia samy manana ny andraikitsika amin'ny fanapahana ny rojom-pitaterana an'ity virus ity ary nanao izany izahay mba hitandroana ny fahasalamana sy filaminana.
Anio hariva dia tiako ny misaotra ny vahoaka Seychellois tamin'ny firaisan-kina, ny firaisan-tsaina ary ny fifehezana. Tiako indrindra ny misaotra ireo mpiasan'ny fahasalamana sy ireo mpilatsaka an-tsitrapo rehetra, sy ireo rehetra miasa amin'ny serivisy ilaina sy ny serivisy fitsikerana. Amin'ny anaran'ny mponin'i Seychelles, misaotra betsaka.
Raha tsy voafehy hatramin'ny alahady 3 may ny toe-javatra dia hanangana famerana sasany am-pahefana izahay amin'ny ampitso.
Raha jerena ity vonjy taitra ho an'ny fahasalamam-bahoaka ity dia tsy maintsy atao tsikelikely ny fampiakarana fepetra miaraka am-pitandremana lehibe. Tsy misy toerana ho an'ny lesoka.
Taorian'ny fifanakalozan-kevitra nataoko tamin'ny Komisiona momba ny fahasalamam-bahoaka, Doctor Jude Gedeon, sy ny ekipany, dia tiako ny manambara fanalefahana tsimoramora ny fameperana toy izao:
Manomboka ny Alatsinainy 4 Mey,
Voalohany, hesorina ny fameperana rehetra amin'ny hetsiky ny olona.
Faharoa, ny fotoam-pivavahana, ao anatin'izany ny fotoam-pandevenana, dia ho afaka hanohy aorian'ny fitarihana avy amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana.
Fahatelo, ny fivarotana rehetra dia afaka mijanona misokatra hatramin'ny 8 hariva amin'ny hariva.
Fahefatra, ny ankamaroan'ny serivisy sy ny orinasa dia ho afaka hisokatra indray. Ireo orinasam-pananganana dia afaka manohy ny asany araka ny tari-dàlana navoakan'ny Departemantan'ny Fahasalamana.
Nanomboka ny 11 Mey,
Ny serivisy fikarakarana zaza sy fikarakarana zaza rehetra, ireo andrim-pianarana aorian'ny ambaratonga faharoa anisan'izany ny A-Levels, Guy Morel Institute ary ny University of Seychelles, dia hisokatra indray.
Nanomboka ny 18 Mey,
Hisokatra daholo ny sekoly ambaratonga voalohany sy ambaratonga faharoa.
Manomboka amin'ny 1 Jona,
Voalohany, hisokatra ny seranam-piaramanidina hisidina sidina ara-barotra mifanaraka amin'ny torolàlana navoakan'ny Departemantan'ny Fahasalamana.
Faharoa, Seychellois dia afaka mivezivezy any ivelany araka ny torolàlana sy fitsipika navoakan'ny Departemantan'ny Fahasalamana.
Fahatelo, ny sambo fialam-boly sy ny yachts dia ho afaka hiditra ao amin'ny faritanin'i Seychelles, manaja izay toro-lalana rehetra avy amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana.
Fahefatra, afaka manomboka indray ireo hetsika ara-panatanjahantena manaraka ny torolàlana avy amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana.
Ny fepetra hafa rehetra dia hijanona ho manan-kery.
Tokony hotadidintsika fa mavitrika ny toe-draharaha ary ny fepetra azo jerena na havaozina amin'ny fotoana rehetra mba hiarovana ny fahasalamam-bahoaka.
Amin'ny volana ambony, Air Seychelles dia hanao sidina fampodiana an'ireo marary Seychellois any India sy Sri Lanka ankehitriny. Ireo sidina ireo dia hanompo an'ireo Seychellois mihitsoka ao amin'ireto firenena roa ireto ihany: manentana azy ireo aho mba hifandray amin'ny masoivoho.
Ao amin'ny zava-misy vaovao isika. Izay mitaky fomba vaovao amin'ny fanaovana zavatra, fomba fiaina vaovao ary fahatsapana andraikitra vaovao.
Na dia nisy aza ny fepetra nesorina, dia mila miambina hatrany isika ary mitandrina mba tsy hanao an'ity fahavalo tsy hita maso ity. Raha miova ny toe-javatra dia mety mila apetraka indray ny fameperana: hodinihintsika ireo fepetra miaraka amin'ny tanjona hitohizan'ny fiarovana ny fahasalaman'ny olonay.
Tsy maintsy manohy manao fanazaran-tena lavitra sy mitazona fahadiovana tsara isika, mifanaraka amin'ny torolàlana avy amin'ny Departemantan'ny fahasalamana.
Ny departemantan'ny fahasalamana dia nanomboka niara-niasa tamin'ny fikambanana hanomana drafitra namboarina momba ny fomba fiasan'izy ireo raha ny zava-misy vaovao misy antsika.
Aoka ho fantatsika fa mandritra ny volana Mey, tsy misy olona miditra amin'ny firenena. Izahay ihany no mivezivezy. Andao hampiasa io fotoana io hanamafisana ireo fomba fanao vaovao nianarantsika: manazatra ny halaviran'ny vatana, manasa tanana, mitazona fahadiovana madio. Manentana ny toeram-piasana sy ny sekoly aho hampiasa an'ity fotoana ity hanomanana sy hampitaovana ny tenanareo amin'ity zava-misy vaovao ity ary hanampy antsika hiomana amin'ny zavatra tokony hataontsika miaraka.
Raha mbola mitohy eto amin'ity tontolo ity ity viriosy ity dia tsy maintsy manohy manatsara ny valin'ny fahasalamam-bahoaka isika.
Rehefa manokatra ny sisintaninay indray izahay, dia hanao fanaraha-maso amin'ny fomba hentitra mba hahitana tranga vaovao ary handray ny dingana ilaina
Ny lafiny faharoa amin'ny valin'ny COVID-19 mitohy dia fanamafisana ny fanarahana fifandraisana. Hatsarainay ny hafainganana sy ny fahombiazan'ny dianay mifandraika amin'ny fifandraisana mba handravana ireo rojom-pifandraisana.
Ary farany, ny valintenintsika mitohy dia ho tohanan'ny fitsapana. Izahay dia hitazona ny fisedrana avo lenta ary hametraka ireo izay mizaha toetra tsara eo amin'ny foibe fitsaboana.
Miaraka amin'ireto andry 3 ireto: fanaraha-maso henjana ny sisin-tany, fanarahan-dia henjana ary fanandramana, hanohy hampihena ny risika izahay ary hitandrina ny toe-draharaha.
Rehefa miomana amin'ny fanonganana fetra sasany isika, dia mila manomana ny tenantsika hiaina amin'ity zava-misy vaovao ity ihany koa ary hanambatra fomba vaovao hanaovana zavatra.
Raha mbola tsy misy vaksiny na fitsaboana io virus io dia mila miambina hatrany isika, mitazona ny halaviran'ny vatana ary manohy manaraka ny torolàlana avy amin'ny Departemantan'ny Fahasalamana.
Mila asa be dia be izany, fahafoizan-tena be dia be ary fanitsiana betsaka amin'ny sehatra manokana sy iraisan'ny rehetra. Tsy ho toy ny taloha intsony ny raharaha. Fa fantatro fa vitantsika izany. Ary fantatro izany satria efa manao an'io isika, miaraka.
Manantena aho fa rehefa misy fanalefahana ny fepetra manomboka amin'ny 4 Mey, dia azontsika atao tsara ny mankasitraka ireo zavatra tsotra: ny hatsaran-tarehin'ny firenentsika, ny rano madio ao anaty ranomasina, hiran'ny vorona; ny fotoana hifankahitana sy hifandraisana. Amin'ny maha-mpianatra ahy any an-tsekoly, fankasitrahana tsaratsara kokoa ny fisian'ny namantsika sy ireo mpampianatra antsika. Amin'ny maha mpiasa anao, fankasitrahana tsara kokoa ny fotoana ahafahana miverina miasa sy mahita ireo mpiara-miasa aminay. Ny lanjan ny fiainana, ny lanjan ny ankohonana, ny lanjan ny finamanana, ny lanjan ny manodidina ary ny lanjan ny fiarahamonina.
Tafaray izahay. Andao hijanona ho olona tafaray.
Rehefa maheno sy mahita ny zava-mitranga amin'ny tontolo manodidina antsika isika, dia fantatsika fa tena vahoaka voatahy isika any Seychelles.
Andriamanitra anie hitahy hatrany ny Seychelles antsika sy hiaro ny olontsika.
Misaotra ary mirary hariva.